अटो क्षेत्रले राजस्व र रोजगारीमा दिएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन : करण चौधरीको अन्तर्वार्ता « Bizkhabar Online
12 May, 2020 11:54 am
विगत २ बर्षदेखि ओरालो लागेको नेपालको अटो बजार लकडाउनका कारण ठप्प नै छ । लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्दै सोही अनुरुप सरकारको ढुकुटीमा कर राजस्व योगदान गर्दै आएको यस व्यवसाय बन्द हुँदा सोही अनुरुप रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ भने सरकारको राजस्व पनि । कृषिदेखि उद्योग व्यवसाय संचालनसम्मका लागि मोविलिटी अनिवार्य भैसकेपनि सरकारले यसलाई अत्यावश्यक बस्तुको सूचीमा राख्दा समस्या उत्पन्न भएको सम्बद्ध व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर सिजी मोटोकोर्पका प्रबन्ध निर्देशक तथा नाडा अटोमोबाईल्स डिलर्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का उपाध्यक्ष करण चौधरीसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
विश्वव्यापीरुपमा कोरोना भाईरस (कोभिड१९) फैलिएकोसँगै हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौं । यसले नेपालको अटोमोबाइर्ल क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
कोरोनाले अटो क्षेत्रलाई मात्र होइन देशको विकासलाई नै पछि पारिदिएको छ । समग्रमा यसले विश्व अर्थतन्त्र पछाडी धकेलिदिएको छ । यसले हाम्रो दैनिक जीवनयापनमै धेरै परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । यातायात साधनको प्रयोगमा पनि केहि परिवर्तन आउने छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा आवतजावत गर्ने यात्रुको संख्यामा गिरावट आउनेछ । कोरोनाको भ्याक्सिन वा औषधि नबन्दासम्म हामी यसको त्रासबाट मुक्त हुन सकिने अवस्था छैन जसका कारण सार्वजनिक यातायातलाई मानिसले सकेसम्म कम उपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।
अबका दिनमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि व्यक्तिगत सवारीसाधन प्रयोगगर्ने क्रम बढ्ने छ । जस्तै, मोटरसाईकल, स्कुटर, कारको माग बढ्ने छ, सेकेन्ड ह्याण्ड सवारी साधनको माग पनि बढ्ने छ । खासगरी कम मूल्यका सवारीसाधन खरिद गर्नेछन् । इन्फोसिसका संचालकले पनि मानिसहरुले विलासीता (लक्जरी)का सागम्रीमा गरिने खर्च ६० प्रतिशतले घट्ने बताएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा जिवनयापनमा खर्च बढ्नेछ । यस अघि उपभोक्ताले पेट्रोल वा डिजेलमध्ये कुन गाडी किफायती, लामो दूरीका लागि कुन सवारीसाधन उपयुक्त भनेर कुनै हिसावकिताव नगरी सवारीसाधन खरिद गर्दै आएका थिए । अबका दिनमा उपभोक्ताले कुन गाडि आवश्यक हो र कुन गाडि लक्जरी हो, कुनले खर्च कम गराउँछ भन्ने सोच्ने छन् ।
निजी सवारीसाधन प्रति आकर्षण बढाने निश्चितप्रायः छ तर व्यवसाय कस्तो हुन्छ भन्नेमा चाहि सरकारको नीतिले निर्धारण गर्ने छ । विगत ४/५ वर्ष यताको सरकारी नीति हेर्ने हो भने अटो लोन र रिटेल कर्जालाई त्यति प्राथमिकता दिएको देखिदैन । उनीहरुले यसलाई अनुत्पादक भन्दै आएका छन् । अबका दिनमा उत्पादन वा अनुत्पादक भन्दा पनि मानिसको आवश्यकतामा के हो त्यसमा बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा मानिसको चासो बढ्छ, आवश्यकता पनि हुने छ । तर, सहजता बनाईदिन सरकारले खुकुला र उपभोक्ता मैत्री नीति लिनुपर्छ ।
तपाई व्यसायीहरुले आटोमोबाईलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउँदै आउनु भएको छ । कोरोना र बन्दाबन्दको कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा गिरावट आईरहँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रको योगदान ठूलो छ । सवारी किन्दा ग्राहकले तिर्ने कर होस वा अटो कम्पनीहरुले तिर्ने संस्थागत कर, यसले नेपालको कर राजस्वमा ठूलो योगदान गर्दै आएको छ । राजस्वमा मात्रै होइन यस क्षेत्रको योगदान रोजगारीमा पनि धेरै छ । सरकारी नीतिका कारण कोरोना माहामारीभन्दा अघिदेखि नै अटो क्षेत्रको व्यवसाय खस्किदो छ । जसका कारण यस क्षेत्रबाट सरकारलाई हुने योगदानमा पनि गिरावट आएको छ । सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि पनि अटो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्ने छ ।हामी नेपाललाई ‘थर्ड वल्र्ड कन्ट्री’ भन्दै आएका छौं । भारतजस्तो ठूलो र बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अटोउद्योगले प्रत्यक्ष रुपमा १ प्रतिशत योगदान दिएको छ । तर, सम्पूर्ण अटो क्षेत्रको कर, भन्सार, रोजगारी लगायत हिसाव गर्दा भारतको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा यस क्षेत्रले ११ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । भारतजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रले मात्रै यति ठूलो योगदान गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन ।
यदि नेपाल सरकारले अटो क्षेत्रलाई सोही अनुरुप सम्बोधन गरेन भने अर्थतन्त्रमै ‘रिसेसन’ ल्याउनेछ । अर्को कुरा बेरोजगारीको संख्या पनि बढ्नेछ । कुनै व्यवसाय राम्रो भयो भने त यसले रोजगारी प्रदान गर्छ, सरकारी ढुकुटीमा योगदान वा अन्य सामाजिक कार्य गर्न सकिन्छ । कुनै उद्योग व्यवसायमा प्रशासनिक तथा कामदारका लागि गरिने खर्च ठूलो हुन्छ । यदि व्यापार व्यवसाय भएन भने त्यसलाई कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको पहिलो असर रोजगारीमा पर्नेछ । अहिले भएको रोजगारी जोगाईराख्न तथा नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि अटो क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
‘अहिले राज्यलाई राजस्व चाहिएको छ, रोजगारी बढाउनैपर्ने दवाव पनि छ । मुलुकको राजस्वमा अटोमोवाईल क्षेत्रको योगदान धेरै छ, यस क्षेत्रले वर्कशपमा काम गर्ने मेकानिकदेखि कर्पोरेट हाउसमा सिईओसम्मलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने यस क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ ।’
हामीले सहयोग भन्दै सरकारसँग अनुदान माग्न खोजेका होइनौं तर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाईदिनु पर्यो भनेका हौं । उदाहरणकै लागि सरकारले अफिस तथा अटो ओर्कशप खोल्नु भनेको छ । तर वर्कशपसँग कामदार ल्याउन पास छैन, टाईमकार्डको व्यवस्था गरिएको छ यो त्यति व्यवहारिक दैखिदैन । उदारहणका लागि अटो व्यवसायीले ओर्कशप खोले तर ग्राहक त्यहासम्म कसरी आउने ? यसलाई ३६० डिग्रीबाट सोच्नु जरुरी छ । अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या निम्तिने छ ।
अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रबाहलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भनेका छन् । सरकारले अटो क्षेत्रलाई उत्पादनमुल क्षेत्रमा राखेको छैन, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामाअटो क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
विगतका नजिर हेर्दा सरकारको पहिलो निसानामा अटो क्षेत्र पर्दै आएको छ । सरकारले नयाँ नयाँ नीति नियम अंगिकार गर्दा सबैभन्दा पहिलो मारमा अटो क्षेत्रलाई पार्ने गरिएको छ । तर, यो विषम अवस्थामा सरकारले कस्तो नीति अंगिकार गर्छ भन्ने विषयमा अन्यौलनै छ । यस क्षेत्रले लाखौं युवालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । राज्यलाई अहिले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । तर, विगत हेर्दा राज्यले एकतिर रोजगारी सिर्जनाको कुरा गर्छ भने अर्को तर्फ रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउँदै आएको छ । यो आफैमा दोहोरो नीति भएन र ? उदाहरणका लागि अटो क्षेत्रले ओर्कशपमा काम गर्ने कामदारदेखि कर्पोरेट हाउसमा कामगर्ने सीईओसम्मलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । यति धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो सरकारले नै सोच्नुपर्ने विषय हो ।
अर्कोतर्फ तत्कालका लागि मानिसको पहिलो प्राथमिकतामा सवारीसाधन खरिदमा पर्दैन । सकभर पैसा बचत गर्न खोज्छन्, एकदमै आवश्यता भएमा मात्र गाडि किन्नेछन् । गाडि बिक्री गर्नेको समस्या बेग्लै छ । राज्यले अटो क्षेत्रलाई रिकभरी गर्नका लागि नयाँ योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । अटो क्षेत्रले २५० प्रतिशतदेखि ३०० प्रतिशतसम्म कर तिर्दे आएको छ । राज्यको ढुकुटीमा यति ठूलो मात्रामा योगदान दिँदै सोही अनुरुपको रोजगारी सिर्जना गरेको यस क्षेत्रलाई कसरी संबोधन गर्नुपर्छ यो सरकारको जिम्मा हो ।
अहिले सरकारलाई स्रोतको संकुचन छ, अर्थमन्त्री राजस्व बढाउनुपर्ने दवावमा छन् । तर, यो अवस्थामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसअघिका ट्रेण्ड हेर्दा सरकारले प्राय चुरोट, मदिरा तथा अटो क्षेत्रकै कर बढाउँदै आएको देखिन्छ । फेरी यसैको मारमा अटो क्षेत्र पर्ने त होइन ?
यस विषयमा नाडाको तर्फबाट सरकारलाई सुझाव पनि दिईसकेका छौं । यस्तो अवस्थामा सवारीसाधनको कर वृद्धि गर्नुभनेको एकदमै नकारात्मक कदम हो । अटो क्षेत्रले राज्यलाई जसरी योगदान दिँदै आएको तर सोही अनुरुप राज्यले हेर्ने दृष्टिकाण सकारात्मक हुन सकेको छैन । व्यवसायीले गाडी बिक्री गर्नेमात्र हो तर राज्यलेकर बढाउदा त्यसको मार उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । यो विषय राज्यले बुझिदिनु जरुरी छ । सुरक्षाको दृटिकोणले आफ्ना नागरिकलाई राज्यले कत्तिको सहज बनाईदिरहेको छ यस विषयमा नीति निर्माताले सोच्न जरुरी छ । उपभोक्ताको आवश्यकता र समस्याप्रति नीति निर्माताले ध्यान दिनैपर्छ । अहिलेसम्म सवारीसाधनमा कति कर बढेको छ, यसलाई यत्तिमै थाती राखेर जनतालाई सवारी साधन खरिदका लागि फण्ड क्रियट गरिदिनुपर्छ । मोविलिटीलाई जनताको आवश्यकता सम्झेर सवारी खरिदमा थप सहज बनाईदिनुपर्छ ।
सरकारले विभिन्न उद्योग व्यवसायलाई बचाउन राहतका प्याकेज ल्याइरहेको छ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पनि ल्याउँदैछ । अबका दिनमा यो क्षेत्र बचाउन कस्तो राहत चाहिएला ? यसका लागि नाडाको तर्फबाट कस्तो सुझाव दिनु भएको छ ?
नाडाका तर्फबाट धेरै सुझाव पठाईसकेका छौं । यसलाई राज्यले कसरी सम्बाधन गर्छ हेर्न बाँकी छ । तर,राज्यसँग हाम्रो एउटै मात्र माग व्यवसाय गर्नका लागि सहज वातावरण बनाईदेउ वा यसलाई प्रोत्साहत गरिदेउभन्ने हो । अहिलेको अवस्थामा बैंक ब्याजदर घटाउने, सवारीसाधन खरिद गर्न सहज बनाईदिने जस्ता काम गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरुले पनि यस्तो अवस्थामा आफ्ना सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा हामी सकज छौ । सोहिअनुसार सिएसआरका काम पनि गर्दै आएका छौं, अन्य दायित्व पुरा गर्दै आएका छौ ।
उदाहरणका लागि सिजी मोटर कार्पले इमर्जेन्सी सेवाका लागि आफ्नो वर्कशपहरु खुला राख्दै आएको छ । बाटोमा ठूलो संंख्यामा एम्बुलेन्स तथा अत्यवश्यकीय मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधन चलिरहेका छन् । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यो विषम परिस्थितीमा पनि हामीले वर्कशप संचालन गर्दै आएका छौं । हामीले नयाँ गाडि बिक्री गर्नेभन्दा पनि यस अघि बिक्री गरेका सवारीसाधनलाई कसरी सेवा दिने भनेर काम गरिरहेका छौं, यो हाम्रो उत्तरदायित्व पनि हो । आईतबारदेखि उपभोक्ताका लागि वर्कशप खुला गरिसकेका छौं । यस्तो अवस्थामा गाडि किन्नु भनेर बजारिकरण गर्नुपनि कत्तिको उचित हुन्छ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विश्व नै संकटमा परिरहेको अवस्थामा हामीले गाडि किन्नुस भनेर भन्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । आजका दिनमा बजारमा सुजुकीको मात्रै ६० हजारभन्दा बढि गाडि सडकमा गुडिरहेका छन् । ति गाडि खरिदगर्ने उपभोक्ताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नमा लागिपरेका छौं । अरु व्यवसायीले पनि गर्ने यहि नै हो ।
सरकारले सबै अटो वर्कशप खोल्नु भनेको छ । यो अवस्थमा तपाईहरुको तयारी के छ । कसरी संचालनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
अहिले जो जो मोकानिक्स तथा श्रकिमहरु वर्कशपसम्म आउन सकेका छन् उनीहरुको तापक्रम जाँच तथा सेनिटाईज गरेर काममा लगाइरहेका छौं । गाडि तथा गाडि मर्मतमा प्रयोगहुने औजारहरु डिसइन्फेट गरेर प्रयोगमा ल्याईरहेका छौं । यदित्यसो गरिएन भने मेकानिक्स वा ग्राहकहरुलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम हुन्छ । सबै मेकानिक्सलाई पीपीई लगाएर मात्र काममा लगाएका छौं ।सामाजिक दूरी कामय गर्दै उच्च सतर्कता अपनाएर काम गरिरहेका छौं ।
अवमा दिनमा अटो क्षेत्रको रिकभर कसरी होला भन्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?
अटो बजारमा विगत दुई बर्षदेखिनै गिरावट आएको छ । सेयरर्ड मोविलिटी (पठाओ, टुटललागय) र सार्वजनिक सवारीसाधने गर्दा नयाँ सवारीसाधन बिक्रीमा गिरावट आएको थियो । तर, अबका दिनमा मासिनहरुले आफ्नो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै निजी सवारीसाधन किन्ने क्रम बढ्नेछ । अन्य देशमा सवारीसाधन खरिदका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन एकदमै सरल र सहज छ । तर नेपालमा फाइनान्सिङको अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो छ । अबका दिनमा सरकारले सवारी खरिदका लागि वित्तीय पुहँचमा सहजता ल्याईदिनुपर्छ । हामीले नाडाकोतर्फबाट सरकालाई आग्रह पनि गरेका छौं । अर्को कुरा गाडिको बर्गिकरण गर्नु जरुरी छ । यो कसका लागि फाइदाजनक छ–कसका लागि छैन, कुन सवारीसाधन विसाली हो–कुन अत्यावश्यक हो, छुट्याउनुपर्छ । सोही अनुरुप उपभोक्तालाई सवारीसाधन गरिद गर्न सहज हुनेगरी प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित ढकालको प्रतिक्रिया-चुनावसँगै प्यानल सकियो, महासंघलाई बलियो र सबल बनाउन लाग्छु
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित चन्द्रप्रसाद ढकालले चुनावी परिणामसँगै महासंघमा प्यानल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजयी, एशोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघई
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र प्रसाद ढकाल निर्वाचित भएका छन्। ढकालले आफ्ना प्रतिद्वन्दी
बस्तुतगतर्फ नरेशलाल श्रेष्ठले ल्याए सबैभन्दा बढी मत, अन्जन र उमेशलाल प्यानलका ७/७ जना विजयी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बस्तुगततर्फको १ सय १ मतको मतगणना सम्पन्न भएको छ